Home News Gudoomiye Mursal oo kulan xasaasi ah la qaatay Safiirka Dowladda Uk u...
Gudoomiye Mursal oo kulan xasaasi ah la qaatay Safiirka Dowladda Uk u fadhiya Soomaaliya
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay Safiirka dowladda Ingiriiska (UK) u fadhiya Soomaaliya Amb. David Concer.
Sidoo kale waxa ay ka wada hadleen doorashooyinka madaxtinimo ee dowlad goboleedyada dalka ka jira gaar ahaan doorashada dowlad goboleedka Soomaliyeed ee Koofur galbeed Soomaaliya.
Guddoomiye Mursal ayaa safiirka warbixin ka siiyay shaqooyinka horyaalla Golaha Shacabka iyo sharciyadii ugu dambeeyay uu Golaha Shacabka ansixiyay.
Waxa uu kaga mahad celiyay kaalinta wanaagsan ee dowladda UK ay ka qaadaneyso hormarinta iyo nabadeynta Soomaaliya.
” Mudane safiir aad baa ugu faraxsanahay inan mar kale halkaan ku kulano, waxaan rabaa inan halkaan ka cadeeyo in dowladda UK aan abaal weyn u heyno, Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay in ay sii xoojiso xiriirka wanaagsan ee naga dhaxeeya”. ayuu yiri guddoomiye Mursal.
Previous articleMadaxweynayaasha Suudaan iyo Jabuuti oo gaaray Adis-ababa (SAWIRO)
Next articleMdaxweynaha Mareykanka oo war kasoo saaray duqeymaha Mareykanka uu ka wado gudaha Soomaaliya
Dadaalo lagu soo afjarayo Kilaafka kataagan Buulo Burde oo Degmadaa ka...